Vibe - ikigai
Matte Lipstick ဆိုတာက နှုတ်ခမ်းသား?အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နူတ်ခမ်းနီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
matte lipstickတော်တော်များများက တာရှည်ခံ ပြီး ဆိုးလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းသားကို? ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
ခီခီ Vibe Lipstick လေးက Velvet Matte Type လေးဖြစ်ပြီး Creamy Texture လေးဖြစ်တာကြောင့် ဆိုးလိုက်ရင် အခြား Matte Type တွေလို ခြောက်ခြောက်ကြီးဖြစ်မသွားပဲ✨နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ အိအိလေး ဖြစ်ပြီးတစ်နေကုန်ခံပါတယ်?
?ခီခီရဲ့? Vibe Lipstick ? လေးကို Online မှာပွတ်လောရိုက်အောင်ကြိုက်နေတဲ့ Customer တွေရဲ့ စကားသံများ ❓
-ပေါ့ပါးနူးညံ့ပြီး ဆိုးရတာ လွယ်တယ် So Good?
-စုတ်တံလေးက ကျစ်လစ်ပြီး သိပ်သိပ်လေးနဲ့ ဆိုးလို့ကောင်းတယ်?❤️
-Vibe? အရောင်လေးတွေက ပိုပြီး Trend ဖြစ်တယ်ရှင့် အရမ်းကြိုက်တယ်
ခီခီရဲ့ Vibe လေးက Customer တွေအသဲစွဲတာလဲ မပြောနဲ့လေ….
?ခီခီ ?Vibe Lipstick ? ရဲ့ တစ်ခြားနှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက် တွေကတော့
-ဘူးအဖုံးလေးစပီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပူရှိန်းနံ့သင်းသင်းလေး ရပါမယ်။ဆိုးပီး ၃ စက္ကန့်လောက်ကြာတာနဲ့ ပူရှိန်းနံ့လေးပျောက်သွားပါမည်။
-Matte Type ဆိုပေမဲ့ အရမ်းမခြောက်ဘဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အိအိလေးနဲ့ Creamy ပုံစံလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ?✨
-Tinted Effect ပါ၀င်တယ်။??ခီခီ Vibe နှုတ်ခမ်းနီလေးက? တစ်ခါဆိုးပီး အနည်းဆုံး (၅ ) နာရီကနေ (၈)နာရီထိ Tinted Effect ကျန်ပါတယ် ⏰?
-Quality အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် Japan နိုင်ငံ ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Color Pigment တွေကိုပဲ အသုံးပြုထားတာကြောင့် အရောင်ထွက်မှန်ပါတယ်
-Smudge မဖြစ်ဘူး ၊ နှုတ်ခမ်းသားအဖက်မလန်စေဘူး။?
-Cosmetic ဆိုပေမဲ့ နူတ်ခမ်းသားအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ Active Ingredients တွေပါဝင်တာကြောင့် နူတ်ခမ်းသားမပျက်စီးဘူး။
?ခီခီ? Vibe Lipstick ? ရဲ့?Main Ingredients? အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့…
– Japan မှ Color Pigment ကိုအသုံးပြုထားလို့ အရောင်ထွက်လှခြင်း၊အရောင်ထွက်မှန်ခြင်း
– France မှ Organic Argan Oil☘️ က Antioxidant? များစွာပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို နူးညံ့အိစက်စေပါတယ်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့်? နှုတ်ခမ်းသားတွေ မည်းလာတာမျိုး မဖြစ်အောင်ကာကွယ် တားဆီးပေးပါတယ်⚡️
– Vitamin-E ပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသား?အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး နေရောင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ်
ဒါ့အပြင်ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးရအောင် ပေါင်းတင်ပေးပါတယ် ✨☘️
– သဘာဝပျားအုံမှ ရတဲ့ Bee Wax? ပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းနီလေး တစ်နေကုန်ခံအောင်လုပ်ဆောင် ပေးပါတယ် ပျော့ပြောင်းချောမွေ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေး ရဖို့ ☘️Active Ingredients☘️ တွေ နှုတ်ခမ်းသားလေးပေါ် အကြာကြီးထိန်းထားနိုင်အောင်လဲ ကူညီပေးပါတယ် ?
– Almond Oil ပါဝင်လို့ပျော့ပျောင်းချောမွေ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို သဘာ၀ပန်းရောင်လေးသမ်းပြီး?လှနေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်✨✨✨
-Sunflower Oil? ပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို? ပျော့ပျောင်းချောမွတ်စေပါတယ်✨
?ခီခီ ရဲ့ Vibe Lipstick ? လေးရဲ့ Colors များ…..
ခီခီရဲ့ Vibe လေးက Trendy ဖြစ်တဲ့ Color တွေနဲ့
လူငယ်တိုင်းကြိုက်တဲ့ အရောင် (7) ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
?101-Funky (Fashion ကျကျလှနေဖို့အတွက်)
?104-Hot (ကိုးရီးယားမလေးလို ချစ်စရာကောင်းစေဖို့)
?107-Fancy (ရဲရဲတောက်ခက်မိုက်မိုက်ကောင်မလေးတွေအတွက်)ဆိုပြီး (7)ရောင် ရှိပါတယ်
?ခီခီရဲ့ ?Vibe Lipstick ? အသုံးပြု ပုံ✅
နှုတ်ခမ်းနီ? အရောင် ပိုထင်းပြီး ပိုလှချင်ရင်တော့ ?ခီခီရဲ့ Vibe? လေး မဆိုးခင် ခီခီရဲ့ Melt On Skin? နဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်ကိုပါးပါးလေး လိမ်းပေးပါ ၊ အဖြူ Base ပေါ်မှာဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီ အရောင် ပိုထင်းပြီး ပိုလှစေပါလိမ့်မယ်နော်
ခီခီရဲ့ Vibe? ကို ပထမဆုံး တစ်လွှာမှာ မထူမပါးလေး အရင် ဆိုးပါမယ် ပြီးရင်⏰ စက္ကန့် (၃၀) လောက် အခြောက်ခံမယ်။
အပေါ်(၁)လွှာ ခြောက်တော့ မှ နောက်ထပ် (၁) လွှာကို ထပ်ဆိုးပါမယ် ?
နှုတ်ခမ်းနီ ပြန်ဖျက်ရင်လည်း Makeup Remover ဖြစ်စေ၊ ဆီ တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေသုံးပြီး ဖျက်ပေးနော် ?
?နှုတ်ခမ်းသား လှပအောင် ဂရုစိုက်နည်း…✅
•နူးညံ့ လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေး✨? ရဖို့ တစ်ပါတ် (၂) ခါ နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ?ဆဲလ်သေတွေ မရှိအောင် အဖတ်လန်တာတွေ မဖြစ်ရအောင် Exfoliate ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
(၁) သကြားနဲ့ ဆီ ကို ရောပြီး Scrub လုပ်ပေးပါ။
(Scrub လုပ်ပြီးတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ? ပိုနေတဲ့ သကြားနဲ့ ဆီတွေကို တစ်သျှူးနဲ့ သုတ်ချလိုက်ပါ?)
(၂) ကွန်ကွန် သုံးပြီးသားအမျှင်လေးတွေ နဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်ပေးပြီး Scrub လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
•ဒါဆိုရင် နုပျိုလှပတဲ့✨ နှုတ်ခမ်းသားလေးမှာ? ခီခီ ရဲ့ Vibe Lipstick ? လေးဆိုးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။
စျေးနှုန်းကလဲ 1.5ml ကို 4500ks ဆိုတော့ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ဆိုးလို့ရပြီနော်